Andro: 3 Desambra 2019
Ny sehatra fanaraha-maso sy fanabeazana ara-teknolojika ara-teknolojia Indexa.com dia nanambara ny fiakaran'ny vidin'ny trano fonenana hita any amin'ny manodidina ny Çekmeköy Metro Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Line, ny fananganana izay natomboka ary nokasaina hosokafana tamin'ny ampahefan'ny 2022. Veysel Karani, [More ...]
Ny International City, Environment and Health Congress 2-4 dia hatao amin'ny aprily 2020 ao Ankara; Mipetraka eny amin'ny manodidina, distrika, faritany, faritra, kaontinanta, nosy ary ny hatsarana mahafinaritra tokana isika; Miara-miresaka ny tontolontsika [More ...]
Samsun Metropolitan Munisipalin'ny TCDD'ye fampitandremana: 'Ny fitohanan'ny tanàna dia mihidy' Samsun Metropolitan Munisipaly, Samsun - Sivas fiaran-dalamby ao amin'ny distrikan'i Ilkadim Ataturk Boulevard Junction Crossing Kılıçdede Junction miampita fiakarana lehibe amin'ny fifamoivoizana ao an-tanàna [More ...]
Ulukışla Boğazköprü Line Overpass Construction Tender Result Tiorka State Railway 2. Ny talen'ny serivisy ho an'ny fividianana eo amin'ny faritra (TCDD) dia manana sanda voafetra amin'ny 2019 / 553589 GCC miaraka amina fetra 6.188.786,01 TL ary ny vidin'ny 9.089.938,50 TL. [More ...]
Kayseri Derevenk Bridge, izay namboarin'i Freysaş tamin'ny fampiasana ny fomba fampiononana mandanjalanja, dia napetraka tamina fanompoana miaraka amin'ny lanonam-panokafana natolotry ny filoha Recep Tayyip Erdoğan sy ny delegasiona miaraka. Daty fanokafana 31 [More ...]
BUMATECH Bursa Machinery Technology Fairs izay mitondra teknolojia fanaovana metaly, teknolojia fanodinana Sheet ary teknika ara-barotra eo ambany tafo tokana, Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) ary TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ny [More ...]
Ny Sampana Polisy Ordu niambina ny fiara fitateram-bahoaka
Tafiditra ao amin'ny Tafika Metropolitan'ny departemantan'ny polisy ao amin'ny departemantan'ny polisy sy ny ekipan'ny fizaram-paritry ny fifamoivoizana sy fiarovana ny ekipa S-plate sy ny fiara fitateram-bahoaka. 19 [More ...]
Mobile Office Caravan dia any amin'ny Service of Kartepeliler
Kocaeli Metropolitan Munisipalin'ny departemanta misahana ny fitaterana sy fitaterana fifamoivoizana, nanomboka tamin'ny alàlan'ny famonoana ny fitakian'ny fitaterana ao amin'ny distrikan'i Kartepe ny Office Mobile Mobile. Mobile Office Caravan 10 [More ...]
Metropolitan Monisipaly Tale Jeneraly ny hambom-pon'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Union ny kaominina ny Torkia ANKARAY Metro Station sy manadio mpiasa miasa ho ny voalohany teo amin'ny "Personal Development" seminera nomena. EGO Dirt Générale Drafitra ny fanatsarana ny serivisy [More ...]
Vaovao ratsy Ankara ..! Fihenam-bidy amin'ny 1 Lira fanafoanana
Vaovao ratsy Ankara ..! Fihenam-bidy amin'ny 1 Lira fanafoanana; Kaody Metropolitan Ankara, 1 pounds, izay nofoanana ny Fitsarana Distrikan'ny Distrika dia nanambara ny saram-pivarotana. Ny saram-piara monisipaly ao Ankara [More ...]
Metro Istanbul dia manomana drafi-doza ho an'ny horohoron-tany Istanbul
Metro Istanbul dia manomana drafi-doza ho an'ny horohoron-tany Istanbul; İGDAŞ, izay manome serivisy fizarana entona voajanahary ho an'ny mpampiasa 6,5 tapitrisa manerana an'i Istanbul, noho ny rafitra fampitandremana teo am-piandohana, dia nametraka ny valivera entona voajanahary alohan'ny horohorontany 5-10 segondra. [More ...]
Izmir tsy misy sakana nosoniavina fitsipika hafa
İzmir Tsy misy sakana nanasonia fitsipika iray hafa; Ahmet Uğur Baran, mpikambana ao amin'ny filankevitry ny kilemaina dia miasa ho praiminisitra ho an'ny ben'ny tanànan'i İzmir Tunç Soyer amin'ny 3 Desambra Andro manerantany momba ny olona manana fahasembanana. Baran, izany fampiharana Torkia [More ...]
Ny lozam-pifamoivoizana an'i Chg Tekirdag dia vokatry ny tsy fitandremana
Ao amin'ny Vaomieran'ny drafitry ny parlemantera sy ny teti-bolan'ny Ministeran'ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa 2020, ao amin'ny CHP Tekirdag Dr. İlhami Özcan Aygun, Lozam-piaran-dalamby ao Çorlu sy lozam-pifamoivoizana haingana any Ankara [More ...]
Ny mpampiasa vola dia maniry amin'ny Mersin Metro avy any Abroad
Mersin, sahirana amin'ny fahazoana findramam-bola avy amin'ny banky ho an'ny daholobe mifandraika amin'ny famatsiam-bola amin'ny rafi-by, dia nankany ivelany. Ny ben'ny tanànan'i Mersin Metropolitan Vahap Seçer dia nilaza, ım Izahay dia mitady crédit avy any ivelany. Te-hanome vola ara-bola sy fananganana orinasa izahay any amin'ny toerana iray ” [More ...]